Rail Industry Show 14-16 Nisan 2020 Tarihlerinde Eskişehir’de Düzenlenecek | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 Eskisehirမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြပွဲ 14-16 ကိုskပြီလ 2020 တွင်အစ်စကစ်ဟီရီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
မီးရထားလုပ်ငန်းပြပွဲ၊ မီးရထားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်နည်းပညာပြပွဲကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏မီးရထားလမ်းနှင့်ရထားလမ်း၏အဓိကကျတဲ့Eskişehirတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဧပြီလ 14 16-2020 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မဟာဗျူဟာအရအရေးကြီးသောမီးရထားလမ်းကဏ္ development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည့်ဒီပြပွဲကိုပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
တူရကီ, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်အဓိကအောင်မြင်မှုများပြပါကတစ်ဦးကိုတိုးမြှင့်အရှိန်နှင့်အတူဆက်လက်။ မီးရထားလုပ်ငန်းပြပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည့်အရေးအကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ရန်ရည်မှန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒေသခံစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်း၍ နယ်ပယ်စည်းရုံးရေးမှူးများ၊ အမျိုးသားအသိပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိပညာများပါ ၀ င်သည်။
သမိုင်း: ဧပြီလ 14 16-2020
ခန့်မှန်းထားသည့် Number ည့်သည်အရေအတွက် - 100 - ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပကုမ္ပဏီ 120
မျှော်မှန်း Vis ည့်သည်အရေအတွက် - 5.000 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
လည်ပတ်ချိန် - 10: 00 - 17: 30
Fira ဘာစီလိုနာ - နိုင်ငံတကာမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပြရန် bcnrail 12 / 01 / 2010 နေရပ်လိပ်စာ: Avda ။ Reina Ma ခရစ်စတီးနား ES n / s - ဘာစီလိုနာဖုန်း 8004: 34932332000 ဖက်စ်: + 34932332287 E-Mail က: ဆက်သွယ်ရန် bcnrail@firabcn.es: Herr Xavier Pascual
14 ။ အဆိုပါ 4-5 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဧပြီလနေ့စွဲအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပ 14 / 03 / 2012 ရာနှင့်ချီသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်2ရက်များ၌အဆက်မပြတ်အတူတူရှိနေလိမ့်မည်။ ... သင်ကရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမကြာမီအစီအစဉ်တွင်ပါလိမ့်မည်။
ဥရောပအာရှရထားတရားမျှတသောစတငျရမတ်လ79-2013 des ကုမ္ပဏီတစ်ခုကခုနှစ်တွင်! 27 / 02 / 2013 DeSA ကုမ္ပဏီမှ 7-9 2013 ကိုမတ်လတွင် Eurasia Rail 2013 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။9ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဖြတ်စက်၊ ဆက်သွယ်စက်ကဲ့သို့လျှပ်စစ်
အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အတူဧရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအီဂျစ်လူပျိုမီးရထားနှင့်ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ, အောက်တိုဘာလ 11 13-2017 အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်း & အာဖရိကရထား Show ကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် 25 / 02 / 2017 အီဂျစ်၏တစ်ခုတည်းသောရထားလမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမီးရထားပြပွဲ 11-13 အောက်တိုဘာ 2017 အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမီးရထားပြပွဲ
အရှေ့အလယ်ပိုင်း & အာဖရိကရထား Show ကိုအောက်တိုဘာလအတွက်ကိုင်ရိုတွင်ကျင်းပခံရဖို့ 07 / 03 / 2017 အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမီးရထားပြပွဲနှင့်အတူအာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်အီဂျစ်၏တစ် ဦး တည်းသောရထားလမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ - 11-13 အောက်တိုဘာ 2017 အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကမီးရထားပြပွဲ၊
Fira ဘာစီလိုနာ - နိုင်ငံတကာမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပြရန် bcnrail
14 ။ အဆိုပါ 4-5 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဧပြီလနေ့စွဲအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပ
ဥရောပအာရှရထားတရားမျှတသောစတငျရမတ်လ79-2013 des ကုမ္ပဏီတစ်ခုကခုနှစ်တွင်!
အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အတူဧရာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအီဂျစ်လူပျိုမီးရထားနှင့်ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ, အောက်တိုဘာလ 11 13-2017 အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်း & အာဖရိကရထား Show ကိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်
အရှေ့အလယ်ပိုင်း & အာဖရိကရထား Show ကိုအောက်တိုဘာလအတွက်ကိုင်ရိုတွင်ကျင်းပခံရဖို့
တရားမျှတသောသင်ဟာအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်း & အာဖရိကရထား Show ကိုသင်၏အရာဌာနကိုယူ
SWERIG - ဆွီဒင်ရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအုပ်စု
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: ရထားလမ်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးများ 2013 - လိုင်လီ
ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး - ဥရောပရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ